Sir Zaw-Basic Civil Engineering Class
#Steel_Structure (Online Class) (25-07-2020) တွင် စပါမည်။ ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။ Zoom Application ဖြင့် face to face အမေးအဖြေ လုပ်ပြီး နားလည်သည်ထိ သင်ကြားပေးပါမည်။ #Steel_Structure နဲ့ပါတ်သက်ပြီး Site ထဲမှာ အခြေခံနည်းစနစ်ပိုင်နိုင်စွာ နဲ့ Site Engineer လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားသူများ။ Project တခုလုံးကို ကုန်ကျစရိတ် အသေးစိတ်တွက်ချက်ပြီး အရှုံးအမြတ်ကို Control လုပ်နိုင်တဲ့ QS တယောက် အဖြစ် လုပ်ကိုင်လိုသူများ။ Steel Structure ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ Moment Connection၊ Shear Connection များအပြင် အခြေခံသိထားသင့်တဲ့ Column size၊Beam Size များခန့်မှန်းခြင်း၊Column Splice၊ Beam Splice များ၏ ဆက်သင့်သည် နေရာများကို နားလည်ထားပြီး Engineer တယောက် အဖြစ် လုပ်လိုသူများ။ #Fabricationလုပ်ငန်းမှInstallationလုပ်ပြီးသည်အထိ Engineer တယောက်သိရှိနားလည်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို အသေးစိတ်သင်ကြားပေးမည့် #Steel_Structure_Estimate_Class ကို အတန်းသစ်ဖွင့်လှစ်ပါမည်။ သင်တန်းပြီးလျှင် ဘာတွေနားလည်တတ်ကျွမ်းမည်လဲ သိရှိလိုပါက သင်တန်း​သားဟောင်းများ​၏အမြင်များကို ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်. . . https://www.facebook.com/466012880401914/posts/1021932908143239/ (သင်ကြားမှုအသေးစိတ်ကို အောက်တွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။) #SS_Class Starting Date : 25-07-2020 ⏰ Time : Fri-Sat-Sun (6:00-8:30)Pm Duration : 3~4 Weeks Fee : 80,000 Ks (စာရွက်စာတန်း - Soft Copy နှင့် Certificate အပါအဝင်) သင်တန်းသားဦးရေကန့်သတ်ထားပါသည်။ ☎(သင်တန်းလာရောက်အပ်နှံမည်ဆိုပါက ဖုန်းကြိုဆက်ရန်) သင်တန်းနေရာ - အမှတ် (12), ပထမထပ်၊ ဇောတိကလမ်း, စမ်းချောင်းမြို့နယ်, ရန်ကုန်မြို့။ (မြေနီကုန်းမှတ်တိုင်) 09252232223, 09450015750 #သင်ကြားမှုအသေးစိတ်….. H Beam, I Beam, MS Plate, Anchor Bolt, Angle Iron, C Channel စသည့် တို့ကို ပုံနှင့်တကွ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြီး ၎င်းတို့၏အလေးချိန် (Weight) တွက်ချက်မှုများ သင်ပြပေးခြင်း။ Column, Beam, Base Plate, Gusset Plate များ တပ်ခြင်းလုပ်ငန်းမလုပ်မှီ ထုပ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ပုံကိုင်ပုံများကို ပုံများဖြင့် ရှင်းလင်းသင်ပြပေးခြင်း။ Structure အတွက်အရေးကြီးသော Moment Connection အမျိုးမျိုး၊ Shear Connection အမျိုးမျိုး တို့ကို ပုံနှင့်တကွ ရှင်းလင်းသင်ပြပေးခြင်း။ Installation လုပ်ရာတွင် Site ထဲမှာ မိမိကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်ကိုင်နေရသကဲသို့ သိမြင် နားလည်သွားစေရန် Anchor Bolt တပ်ခြင်း လုပ်ငန်းမှ အမိုးပိုင်းရှိ Purlin များ Sag Rog များ Wing Bracing များ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအထိ အစိတ်အပိုင်းတခုချင်းစီအား 3D ဆွဲပြီး တပ်ဆင်ပြခြင်း။ Site ထဲ တခါမှ မလုပ်ဖူးသောသူများဖြစ်ပါစေ Fabrication (ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) မှ Installation (တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း) အထိ အသေးစိတ် သိမြင်နားလည်လာသည်အထိ ရှင်းလင်းသင်ပြပေးပါမည်။ Esrimate အပိုင်းတွင် Site လုပ်ငန်းနားလည်အောင်ရှင်းပြသင်ကြားပြီး..... Column များ Beamများတွက်ပြီး ၎င်းနှင်းဆက်စပ်နေသော Anchor Bolt, Base Plate, Gusset Plate,Bolt & Nuts, Column Splice, Beam Splice, Stiffener များ ကို အသေးစိတ်တွက်ခြင်း။ Decking Sheet လုပ်ငန်းအတွက် Shear Stud များ Decking Sheet Stopper များ တွက်ချက်ခြင်း။ အမိုးလုပ်ငန်းအတွက် Purlin များ၊ Purlin Cleat များ၊ Bolt & Nuts များ၊ Sag Rod, Wind Bracing နှင့် Turn Buckle များ တွက်ခြင်း။ Roofing Sheet လုပ်ငန်းတွင်4Angle Sheet များတွက်ချက်ပုံကို လက်တွေ့တွက်ယူခြင်း နှင့် Yellow Book မှ Rate ထုတ်ပုံများကိုလဲ အသေးစိတ်သင်ကြားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် Ridging နှင် Wall Capping များ တပ်ဆင်ခြင်း၊ Eave Board များ၊ Gutter များ တပ်ဆင်ခြင်း တို့ပါတွက်ချက်သင်ပြပါမည်။ နောက်ဆုံး Painting လုပ်ငန်းအတွက် H Beam, I Beam, MS Plate တို့ကို အောက်ခံဆေးသုတ်ခြင်း Final ဆေးသုတ်ခြင်းများအား သေချာနားလည်မြင်သာအောင် ရှင်းလင်းတွက်ချက်သင်ပြပေးဖြစ်ပါသည်။ Computer တွင် Excel ဖြင့်ပဲ အသုံးပြုတွက်ချက်ရမည်လား? မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိကိုယ်တိုင် Note စာအုပ်တွင် အသေးစိတ်ကို Hand Calculation အရင်တွက်ချက်ပြီးမှ Excel တွင် ထည့်ပြီး Detail of Measurement မှ B.E, B.Q, A.C နှင့် Total Cost ရသည်အထိ Excel Link ချိတ်နည်းကအစ Fomula ထည့်သွင်းခြင်းများပါ သင်ကြားပြသပေးပါမည်…. သင်တန်းပြီးပါက Steel Structure အခြေခံနားလည်တတ်ကျွမ်းပြီး Site Engineer အနေနဲ့ဖြစ်လည်းကောင်း၊ QS တယောက်အနေနဲ့ပါ ယုံကြည်မှုရှိစွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ #သတ်မှတ်ထားသောသင်တန်းချိန်ပြည့်မှသာသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ပေးပါမည်။ #သင်ဆရာ_မြင်ဆရာ_ကြားဆရာ အားလုံးကို ဂါဝရပြုပါသည်။ ****************************** #SirZaw #Basic_Civil_E
It's NOT an iron, It's NOTahybrid, It's NOTafairway wood... It'saperfect combination of all three. We had golfers test it for themselves using their approach club of choice, tracking4major categories ​ Launch Angle – 79% of test golfers higher with MW8 ​ Maximum Height – 88% of test golfers higher with MW8 ​ Carry Distance – 75% of test golfers longer with MW8 ​ Landing Angle – 81% of test golfers steeper with MW8 If we had kept track of Wows and Whoas and Holy Bleeps, the Moon Wood would’ve won that byamile, too. Want to learn more or see how the test was conducted? Check it all out in the link below
Forever Steel Co., Ltd
ဖုန်းဆက်မှာလိုက်ရုံဖြင့် သံထည်ပစ္စည်းများကို Forever Steel Co., Ltd. မှပို့ဆောင်ပေးနေပါသည်။ Coronavirus Diseases(COVID-19) ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်အတွက် စော်ဘွားကြီးကုန်းပွဲရုံဝင်းမှ ကျွန်တော်များ Forever Steel Co., Ltd. အပါအဝင် အခြားဆိုင်မျာအားလုံး 30.4.2020 ရက်နေ့ထိ ပိတ်ထားသောကြောင့် ဝယ်သူများအဆင်ပြေစေရန် ဖုန်းဆက်၍ဖြစ်စေ Viber နှင့် Messenger တို့မှဖြစ်စေ မှာယူရုံဖြင့် Forever Steel တောင်ဒဂုံအရောင်းဆိုင်ခွဲမှ ပစ္စည်းအနည်းအများပေါ်မူတည်၍ သင့်တော်ရာကားများစီစဉ်ပြီး အရောက်ပို့ပေးခြင်းဝန်ဆောင်မူကို ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ ပစ္စည်းများလာရောက်ကြည့်ရူ ဝယ်ယူလိုသူများအတွက်လည်း တောင်ဒဂုံဆိုင်ခွဲတွင် ဖွင့်လှစ်ရောင်းချပေးနေပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် 09 78 515 6004, 09 98 515 6004, 09 95 515 6004, 09 26 515 6004, 09 42 515 6004, 09 44 515 6004, 09 68 515 6004, 09 88 515 6004, 09 79 515 6004, 09 89 515 6004, 09 515 6004 foreversteelcompany@gmail.com စော်ဘွားကြီကုန်းဆိုင် အဆောင်(၁၀၃)၊ အခန်း(၅၊၆)၊ ရွှေဝါလမ်းမကြီး၊ စော်ဘွားကြီးကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ စော်ဘွားကြီကုန်း ကုန်သိုလှောင်ရုံ။ အဆောင်(၈၈)၊ အခန်း (၁၊၂)၊နီလာ(၁၀)လမ်း၊စော်ဘွားကြီးကုန်း၊အင်းစိန်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ တောင်ဒဂုံဆိုင်ခွဲ နှင် ကုန်သိုလှောင်ရုံ။ အမှတ် (၇၃၊၇၅)၊ ဟားခါးလမ်း၊ တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန် (၁)၊ တောင်ဒဂုံ။ စက်ရုံ။ အမှတ် (၁၈၉ / ခ ) မော်လမြိုင်လမ်း၊ တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန်( ၁ )၊တောင်ဒဂုံ။ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သိရှိနိုင်ရန် Comment တွင် Hi လုပ်လိုက်ရုံဖြင့် Messenger တွင် သင်၏မေးခွန်းများကို အလိုအလျောက်ဖြေကြားခြင်းစနစ်မှ လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ #Scaffolding #T #Prop #GI #Hollow #Pipe #GI #Round #Pipe #H #Beam #I #Beam #U #Beam #Iron #Plate #Decking #Sheet #Angle #4Angle #C #Channel #Anchor #Bolt
️ Construction work at 85 meters altitude: Building the third-tallest rail bridge in Germany isachallenge, but the Bosch X-Lock system for angle grinders helps save time inatight construction schedule. In the Stuttgart-Ulm rail construction project around 160 metric tons of reinforcement bars need to be laid as quickly as possible so that the concrete can be poured. During this reinforcement work, angle grinders are needed to shorten iron bars. Here the Bosch X-Lock system comes into play, allowing the quick and convenient change of angle grinder accessories. Find out more: http://bit.ly/Filstalbridge_Bosch
ATTENTION MEN: If your life isn't the life YOU want it to be, and you aren't being the man YOU know you can be,amen's team may be just what you are looking for... Our Men’s Teams are now MEETING ONLINE until in-person meetings are once again safe for everyone. You CAN liveapurposeful and passionate life, as you achieve new levels of success. The life and purpose YOU WANT. MDI andaMen's Team can help you get there!
Bob Beach for WV Agriculture Commissioner 2020
Softer Tipp vom Alpaka: Tempo gibt es jetzt auch ohne Duft, Farbstoffe, Allergene.
Aizpildot šo bezmaksas 2min testu, jebkurš var saņemt uztura plānu visam mēnesim. Beidzot uztura programma, kas izskaidro tieši ko ēst, kā ēst un kad ēst. Bezmaksas tests: http://bit.ly/36csSeB Rezultāti atšķiras katram individuāli.
Wejdź z realu do świata #TAKBARDZO mobajlowej rzeczywistości i zgarniaj smartfony Samsung ⚡️
Vesper | Classic & Timeless Designs
ទូរស័ព្ទដ៏ស្រស់ស្អាត Smart Hero​ ជាមួយអេក្រង់ធំ ល្បឿនក៏លឿនជាងមុន មានលក់ហើយក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ 79ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ នៅគ្រប់ Smart Shop ទាំងអស់! ទិញយកឥឡូវនេះ នោះអ្នកនឹងទទួលបានកាសស្តាប់ម៉ាក Pleng ឥតគិតលុយ, ក្លាយជាសមាជិក Pleng Pro រយៈពេល 6ខែ, ការធានារយៈពេល 6ខែ, លេខពិសេសពី Smart និងគម្រោង Smart ធំហ្ម៎ង! មកកាន់ Smart Shop ឥឡូវនេះ!​ Introducing the new Smart Hero! Withalarge screen and incredible all-round performance, and at ONLY 79 USD, you can getaquality smartphone at an affordable price! Get yours NOW and you’ll also receivea6-month warranty, 6-month Pleng Pro subscription,aSmart number, Smart ThomMorng! plan and Pleng headphones for FREE! Forasmartphone that meets your needs and more, getaSmart Hero!